ကလေးတစ်ယောက်အဖေ လူပြိုနှင့် ရှင်နှောင်း (လိပ်ပြာလုံသူများ၊ သူတစ်ပါးမိသားစုအား မဖျက်ဆီးသူများ၊ အမှားသိ၍ အမှန်ပြင်နိုင်သူများသာ ဤပို့စ်ကို ရှယ်နိုင်ပါသည်)
May 30, 2018 By Buzz Myanmar News in အချစ်ဆိုင်ရာ, အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ, အမျိုးသားဆိုင်ရာ Tags: ဂုဏ်သိက္ခာ, ဖုန်းနံပါတ်, မယားငယ်
(၁) ကျွန်မ နာမည်က ရှင်နှောင်းပါ။ သူနဲ့ စတွေ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်က ရိုးရှင်းလှပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုတလော ကျွန်မ အနီးအနားမှာ သူ့ကို မကြာခဏတွေ့လာရတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြည့်နက်နက်တွေကို ကျွန်မ ရှောင်ဖို့ခက်လှသလို ရှက်စိတ်လေးနဲ့ ရင်ဖိုမိတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ။ လူပျိုကြီး မိန်းမမယူသေးဘူးလားလို့ ဝိုင်းစနေကြတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သူက” ဟေ့ကောင်တွေ မနောက်ကြပါနဲ့ကွာ “ဆိုပြီး မျက်နှာကြီး ရဲခနဲဖြစ်ပြီး ပြန်ပြောတယ်။ ကျွန်မ စဉ်းစားမိတယ်။ သူ့လောက် ချောမောခန့်ညားတဲ့သူက ဘာလို့ခုထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့။ လိုရင်းပြောရရင်တော့ ကျွန်မနဲ့ သူနဲ့ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်က မလွယ်ဘူးလေ။ လူလိမ်တွေက အများသားမို့လား။ ဒါကြောင့် ချစ်သူရှိလား အိမ်ထောင်ရှိလား ကျွန်မသေချာအောင် မေးပါတယ်။ အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါတိုင်း သူက ပြန်ပြောတယ်။ ” စိုးရိမ်တတ်ရန်ကော ကလေးရယ် “တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာအောင်စုံစမ်းရမှာက ကျွန်မတာဝန်လေ။ တစ်သက်လုံး သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်လာခဲ့ပြီးမှ မယားငယ် လည်း အဖြစ်မခံနိုင်သလို စနိုက်ကျော်လို့လည်း အပြောမခံနိုင်ပေါင်။ သူ့အကြောင်းတွေ စုံစမ်းရင်းနဲ့ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကအစ ကျွန်မနဲ့ တော်တော်ရင်းနှီးနေပြီ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာရတာက သူအိမ်ထောင်မပြုဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းက အမေချစ်သားမိုလို့ပါတဲ့။ သူ့ရည်းစားဟောင်းကို ဖြတ်ခဲ့တာကလည်း သူ့အမေ သဘောမတူလို့ပါတဲ့။ သူနဲ့အတူ ချစ်သူ ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေပေမဲ့ …….. ဝမ်းနည်းနာကျည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်က စောင့်ကြိုလို့နေပါတော့တယ်။
(၂) ကျွန်မအတွက် အရမ်းကိုတုန်လှုပ်ချောက်ခြားစေခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ ကျွန်မဆီကို ဖုန်းနံပါတ် အစိမ်းတစ်ခု ဝင်လာခဲ့တယ်။ ” ကျွန်မ မြယမုံပါ။ ကိုသီဟထက်နိုင်ရဲ့ အမျိုးသမီး ပါ။ ကိုယ့်ညီမတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး သတိပေးလိုက်မယ်၊ ပိုင်ရှင်ရှိ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မြှူဆွယ်နေတဲ့ကိစ္စ ရပ်တန်းက ရပ်ပေးပါ” တဲ့။ မြယမုံဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ စကားတွေ အဆက်မပြတ် ပြောသွားပေမဲ့ သူ့အသံတွေ တုန်နေတာ ကျွန်မသတိထားမိတယ်။ ကျွန်မမှာ ပြန်ပြောစရာ စကားတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အိပ်မက်ကြီးထဲ ရောက်နေသလိုလို။ ရှက်ရွံ့စိတ် နာကျည်းစိတ်တွေနဲ့အတူ ရင်ဘတ်ကြီးတစ်ခုလုံး ဟာတာတာခံစားချက်တွေနဲ့။ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ ကျွန်မ……ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဖြူစင်စွာ နေလာခဲ့တဲ့ ကျွန်မ…. အခုတော့….. အခုတော့လေ…….. သူများလင်ကိုမှ………….။
မောင့်ကို ကျွန်မ စွန့်လွှတ်ရတော့မှာလား ဆိုတဲ့ အသိက ကျွန်မရင်ကို မီးစနဲ့ ထိုးသလို ပိုပြီး နာကျင်စေပါတယ်။ ဟင့်အင်း…. မောင့်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး၊ ရအောင်ယူမယ်။ ရအောင်ကို ယူပြမယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ …………. စနိုက်ကျော်ခြေလှမ်းနဲ့ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ မိသားစုဘဝတွေကို လိုက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ စနိုက်ကျော်ခြေလှမ်းဆိုတာ …… ဘယ်လိုမျိုးလဲ………။
(၃) မောင့်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ နားလည်မှုအရှိဆုံး မိန်းမလိုမျိုး ကျွန်မ နေခဲ့တယ်။ ချစ်သူစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆို ဘာမဆို ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကို မောင်ယုံအောင် ဟန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ မောင့်အမျိုးသမီးဆီက ဖုန်းလာလို့ မောင်က မကိုင်ချင်ရင်တောင် ” ကိုင်လိုက်ပါမောင်ရယ်. …. မောင့်သမီးလေးကိစ္စဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှာပေါ့” ဆိုပြီး စာနာနားလည်မှုရှိသလိုမျိုး ပြောပေးလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲကတော့ ဘယ်ပါပါ့မလဲနော်။ မောင့်မျက်လုံးထဲမှာ ကျွန်မကို စိတ်ထားအရမ်းဖြူစင်တဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ် မြင်လာအောင် မာယာမျိုးစုံနဲ့ လှည့်ဖြားပါတော့တယ်။ ဒါဟာ စနိုက်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ မိန်းမတွေ အလိုလိုတတ်လာတဲ့ ပညာပါ။ ပြီးတော့လေ မောင့်မိန်းမ ကျက်သရေရှိလှတဲ့အကြောင်း ချောကြောင်း လှကြောင်းပါ ကျွန်မက ချီးကျူးလိုက်သေးတာ။ မောင်က ကျွန်မခေါင်းလေးကို ခပ်ဖွဖွ ပုတ်ပြီး ပြောလိုက်သေးတယ်။ ” မနာလိုတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ မောင့်ရဲ့ အဖြူထည် ငတုံးမလေး”တဲ့။ ကျွန်မအပေါ် သနားစဖွယ် သတ္တဝါလေးလို မောင်က စိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။ ကြွေဆင်းလာတဲ့ မောင့်အကြည့်တွေကို ရီဝေဝေပြန်ကြည့်ရင်း အခွင့်အရေးကို အမိအရ အသုံးချပါတယ်။ မောင့်လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ရင်း……. မောင့်မျက်နှာကို ရွှန်းရွှန်းစားစား စိုက်ကြည့်ရင်း ” မောင်ရယ်…….. မောင်နဲ့ ချွတ်စွပ်တူတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်လောက် မွေးချင်လိုက်တာ “ဆိုပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ကျွန်မ ချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မောင်ဟာ ကျွန်မစကားလုံးတွေအောက် အရည်ပျော်လာပါတော့တယ်။ ဘဝအဆက်ဆက်က သံယောဇဉ်တွေကြောင့် ဒီဘဝမှာ ရုန်းထွက်လို့မရတော့လောက်အောင် ချစ်မိသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မောင့်ကို နားသွင်းခဲ့တယ်၊ ကိုယ်တိုင် ရုန်းမထွက်ချင်တာကို ဝန်မခံဘဲ ဝဋ်ကြွေးရှိလို့ ရုန်းထွက်မရတာဆိုပြီး မောင်သနားအောင် မျက်ရည်ချူခဲ့တယ်။ ” မောင့်အိမ်ထောင်ရေးကို မဖျက်ဆီးချင်ပါဘူး။ ကျွန်မကို လာမတွေ့ပါနဲ့တော့ ကျွန်မကို ထားခဲ့လိုက်ပါတော့နော်” ဆိုပြီး မောင့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းထည့်ပြီး မင်းသမီးရှုံးအောင် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့အားရပါးရ ငိုပြခဲ့တယ်။ “ ကျွန်မအနေအထားနဲ့ဆို ကြိုက်တဲ့လူပျိုကို ခေါင်းခေါက်ယူလို့ရတယ် မောင့်ကို ချစ်လွန်းလို့သာ အပျိုလေးတန်မဲ့သည်းခံနေရတာ”ဆိုပြီးတော့လည်း မရှိမဲ့ရှိမဲ့ စနိုက်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ရပြန်တယ်။ မောင် ကျွန်မကို အထင်သေးလို့မဖြစ်ဘူး။ မောင့်မျက်လုံးထဲမှာ ကျွန်မဟာ အဖြူစင်ဆုံး မိန်းကလေး… ဟုတ်တယ် ကျွန်မသာလျှင် အဖြူစင်ဆုံး။
(၄) ကျွန်တော် သီဟထက်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်မယားငယ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ရည်းစားထားတာပါ။ မိန်းမရှိရက်နဲ့ ရည်းစားထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်အလုပ်တာဝန်က နယ်တွေပြောင်းပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ မိန်းမကလည်း သူ့အလုပ်နဲ့သူဆိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့လိုက်မနေနိုင်ဘူး။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေတောင် ကျွန်တော့်ကို လူပျိုပဲထင်ကြတာ။ ဆိုတော့ကာ ဂွင်ဖန်လို့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တွဲတဲ့ ကောင်မလေးတိုင်းကို ကိုကိုလို့ခေါ်ခိုင်းတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို ဦးတွေ ကိုကြီးတွေတော့ မခေါ်ခိုင်းဘူး။ ဖီးလ်မလာလို့။ အခုကောင်မလေးကတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိ။ မောင်လို့ခေါ်တယ်။ အစကတော့ ရှင်နှောင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို အပျော်ထားတာပဲ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ချစ်စရာကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ကလေးအဖေကြီးမှန်း သိသွားတာတောင် စိတ်မနာတဲ့အပြင် ခွင့်လွှတ်တယ်တဲ့ဗျာ။ ကလေးတစ်ယောက်အဖေ အိမ်ထောင်နဲ့ဆိုတာ ကျွန်တော် မပြောပြခဲ့တာကိုတောင် သူက အပြစ်မမြင်ဘူးဗျ၊ မခွဲနိုင်လို့ ညာခဲ့တာ သူသိပါတယ်တဲ့။ စိတ်ထား နူးညံ့လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးပါဗျာ။ ရှင်နှောင်းနဲ့တွေ့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူရာဝင်သလို ခံစားလာရတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းလေးစားတယ်။ အရမ်းလည်း အားကိုးတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ ကျွန်တော်မရှိလို့ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။ ရှင်နှောင်းလေးက ကျွန်တော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူး။ သူက သိပ်ပြီး စိတ်အားငယ်တတ်တာဗျ။ သိပ်လည်း ရိုးသားတယ်။
…. မောင့်လို ကလေးအဖေကိုတောင် ဘာမှရယူလိုခြင်းမရှိဘဲ ချစ်တယ်တဲ့လား ရှင်နှောင်းလေးရယ်။ ကိုယ့်အပေါ် နားလည်မှုအရှိဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်ကို စွန့်လွှတ်ရလောက်အောင်အထိတော့ မောင်မအသေးပါဘူး ကလေးရယ်…….မောင်တို့ အတူနေနိုင်ဖို့ မောင်အရာအားလုံးကို ရင်ဆိုင်မယ်နော်။ ရှင်နှောင်းလေးသာရှိရင် မောင်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပဲ။
(မှတ်ချက်၊ ယခုအချိန်သည် သားသမီးမေ့လောက်အောင် မွှန်သောအချိန်ဖြစ်သည်)
(၅) စိတ်တွေဆင်းရဲလွန်းလို့ သတ်သေချင်စိတ်တောင် ပေါက်တယ်။ သမီးလေးမျက်နှာကြောင့်သာ ကျွန်မ မြယမုံ အားတင်းပြီး နေနေရတာပါ။ ခြံခုန်တဲ့နွား အကြိမ်ကြိမ် ခြံခုန်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ လက်ခံရတော့မယ်။ အရင်တစ်ခေါက်က သူဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စကို လူကြီးမိဘတွေ ညှိနှိုင်းပေးလို့ သူနဲ့ မကွာရှင်းဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အရင် စနိုက်ကျော်မတုန်းကလည်း ကိုယ့်လူကို နိုင်အောင် ထိန်း ဆိုတဲ့စကားကိုပဲ ထပ်တလဲလဲပြောတယ်။ စနိုက်တွေကို ရှင်းထုတ်တာကလည်း ကိုယ့်လူကို နိုင်အောင်ထိန်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပဲလေ။ စနိုက်မက အပျိုဆိုတော့ တရားစွဲလည်း ကိုယ့်ယောက်ျားပဲ ထောင်ကျမှာလေ။ အဲဒါကြောင့်လည်း စနိုက်တွေ မောက်မာနေနိုင်တာပေါ့။ သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံရင် ကိုယ့်တောင် ပြန်အမှုပတ်မဲ့ကိန်းမျိုးပဲ။ ဒါကြောင့် သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံအောင် စုဆောင်းရတယ်။ လက်ပူးလက်ကြပ်မိအောင် ကျွန်မ ကြိုးစားတယ်။ လက်ပူးလက်ကြပ်ကို မိခဲ့ပါတယ်လေ။ သမီးလေးရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် ရှိစုမဲ့စုနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေးမှာပေါ့။ သူတို့နှစ်ယောက် ဖြစ်ပျက်နေပုံကို မြင်လိုက်ရတဲ့ ကျွန်မနေရာသာ ဝင်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ ချစ်လွန်းလို့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ တခြားမိန်းမတစ်ယောက် ချစ်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပုံကို မျက်လုံးထဲကကို မထွက်ဘူး။ ရင်တွေနာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ နှလုံးသားကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက်လိုက်သလိုပါပဲ။ အတိတ်ကာလက ဒဏ်ရာတွေတောင် အနာမကျက်သေးတဲ့အချိန် ရှင်နှောင်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက တစ်ဖက်မိန်းကလေးကိုပဲ ကျွန်မ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ကျွန်မယောက်ျားကိုယ်တိုင်က မကောင်းတာ ကျွန်မ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ယောက္ခမက အမှန်တရားဘက်က မပါပါဘူး။ သူ့သားဖောက်ပြန်တာတောင် ညည်းေ-ာက်သုံးမကျလို့ ဖောက်ပြန်တာပေါ့တဲ့။ ညည်းက ပျော်အောင်မထားလို့ ငါ့သားလေးက အပျော်ရှာတာတဲ့။ ပြောရက်လိုက်တာ။ သူလည်း သားအပြင် သမီးတွေပါ မွေးထားတာပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိလိုက်တာ။ လင်ယောက်ျားဖောက်ပြန်လို့ စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အပြင် ယောက္ခမကလည်း ကိုယ့်ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်လို့တစ်ဗျစ်တောက်တောက်နဲ့ ပြောနေလေတော့ ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒေါသတွေထွက်လာပြီး အသံကလည်း တော်တော်ကျယ်သွားပါတယ်။
“ဒီမယ် အမေ…. အမေ့သားကို ကျွန်မ ထောင်ချပစ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိရဲ့လား”
“ငါ့မြေးရဲ့ အဖေကို ညည်းက ထောင်ချမယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ မဖြစ်နိုင်တာ မပြောစမ်းပါနဲ့အေ” လို့ ယောက္ခမက ခနိုးခနဲ့ လေသံနဲ့ ပြန်ပြောပါတယ်။
သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ ယောက္ခမကို တရစပ် ပြန်ပြောမိပါတော့တယ်။
“ကျွန်မပြောတာ သေချာနားထောင်ပေးပါ။ ဒီအချိန်က မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာပေးရမဲ့ အချိန်ပါ။ အမေ့မှာလည်း လင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာပေးပါ။ ညည်းကို ကိုယ်ချင်းစာပေးရအောင် ငါ့လင်က အဲ့လိုအတန်းစားထဲ မပါဘူးလို့ အမေပြောလည်း လောလောဆယ်တော့ အမေ့သားက အဲ့လိုအတန်းအစား ဖြစ်နေပါပြီ။ အမေ့သားကို ကျွန်မတရားမစွဲတာကိုတောင် အမေတို့က ကျွန်မကို ကျေးဇူးတင်နေရမှာပါ။ ဒါကို ကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင် ဟိုအကောင်ကို တရားစွဲချင်စိတ် ပေါ်လာအောင် အမေတို့ကိုယ်တိုင် ဆွပေးနေသလို ဖြစ်နေတာကိုရော အမေတို့သိရဲ့လား။ သိကြရဲ့လား။ တစ်လင်တစ်မယားကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် တရားစွဲမှရမယ်လို့ အမေတို့ထင်နေတာလား။ မည်သူမဆို တရားစွဲလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မအစ်ကိုက အရင်တစ်ခေါက်ကိစ္စကတည်းက အမေ့သားကို သတ်ချင်နေတာပါ။ သူ့ညီမလေး ခံစားနေရတာ မကြည့်ရက်လို့ အမေ့သားကို ကျွန်မအစ်ကိုက တစ်လင်တစ်မယားနဲ့ တရားစွဲဖို့လုပ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ အမေ့ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားပေးပါ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန် ဒီစက္ကန့်ပိုင်းကစလို့ အမေ့ပါးစပ်က ကျွန်မအသုံးမကျလို့ ဖြစ်ရတာပါဆိုတဲ့စကား တစ်လုံးတောင် မဟပါနဲ့။ ဒီလောက် ရှင်းပြနေတာတောင်မှ အမေပါးစပ် ဟရဲသေးတယ်ဆိုရင် ဟကြည့်လိုက်ပါ။”
ကျွန်မစကားအဆုံးမှာတော့ ယောက္ခမမှာ တုပ်တုပ်မျှပင် မလှုပ်တော့ချေ။
(၆)” သမီးကြီးရေ……. ရှင်နှောင်း….. ရှင်နှောင်း”.။ ကျွန်မ ဇောချွေူးတွေပျံပြီး အိပ်မက်က လန့်နိုးသွားပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ မိခင်က ကျွန်မနာမည်ကို အားကိုးတကြီး ခေါ်နေပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာဆိုပေမဲ့ အပြင်မှာ ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ စိတ်ထဲမှာလည်းလေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မေမေက တုန်ယင်နေတဲ့လေသံနဲ့ ဖုန်းဆက်လာလို့ အကြောင်းစုံ သိသွားပါတယ်၊ မီရာကားနဲ့ မိဘအိမ်ကို အပြေးပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အိမ်ထဲအရောက်မှာတော့…… ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လေးလှဲလျောင်းနေတဲ့ ကျွန်မညီမလေးကို သနားစဖွယ် တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ ကျွန်မခေါင်းတွေ ချာချာလည် မူးသွားပါတော့တယ်။ ခုတင်ဘေးမှာ ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ဖေဖေ့လက်မှာလည်း ပတ်တီးတွေနဲ့ပါလား။ ညီမလေးက နေ့စေ့လစေ့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ပါ။ ညီမလေးယောက်ျား ကျွန်မရဲ့မတ် ဖောက်ပြန်နေတာကြာပြီတဲ့လေ။ ညီမလေးက နေ့တိုင်း တငိုငိုတရီရီ ဖြစ်နေပြီး မနေ့ကတော့ သွေးကြောကို ဘရိတ်ဓားနဲ့ လှီးပြီး သတ်သေဖို့လုပ်တယ်တဲ့။ အဲဒါကို ဖေဖေမြင်တော့ သားသမီးဇောနဲ့ ပြေးလုလိုက်တာ ဘရိတ်ဓားက ဖေဖေ့လက်ဖဝါးကို ထိုးခွဲမိသလိုပါ ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဖေဖေရယ်….. သားသမီးအတွက် အပူဟာ ဖေဖေ့လက်က ဒဏ်ရာထက် ပိုပြီးနာကျင်ရမယ်ဆိုတာ သမီးနားလည်ပါတယ်။ ညီမလေးက သူ့ယောက်ျားနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်း ကျွန်မကို ပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့….……. ။
(၇) ကိုယ်တိုင်ထိမှ ကျွန်မနာတတ်ခဲ့ပြီလေ။ ညီမလေးရဲ့ ယောက်ျားကို လုယူသွားတဲ့ မိန်းမလုပ်တဲ့အကွက်တွေဟာ ကျွန်မ ဦးသီဟထက်နိုင်ကို ဖြားယောင်းခဲ့တဲ့ မာယာတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းပါပဲလား။ ဒါကြောင့်လည်း အဲ့လူက ဗိုက်ကြီးသည်ညီမလေးကို ပစ်ပြီး စနိုက်မနောက် ပါသွားခဲ့တာကိုး။ ရွံစရာအကောင်းဆုံး မာယာတွေနဲ့ ဖြူစင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူတစ်ပါးမိသားစုကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကျွန်မ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်မ အမှားကြီး မှားသွားပြီ။ လူတစ်ယောက် ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ အမှားဟာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို ထိခိုက်နာကျင်စေတာပါလား။ အတွေးလေးတစ်ချက် မှားတာနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကျွန်မရဲ့ အနာဂတ် ရေစုန်မျောဖို့ သီသီလေးပဲ လိုတော့တာပါလား၊ ကျွန်မစိတ်ကူးမပြောင်းခင်မှာပဲ ခဲရာခဲဆစ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို အမြန်ချပြီး မမြယမုံဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့ဆီကို ကျွန်မဖုန်းခေါ်ပြီး ကျွန်မ မိဘနာမည်၊ မိဘဖုန်းနံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာတို့ကို လိုက်မှတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်မရှေ့တိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် မမြယမုံအနေနဲ့ ကျွန်မကို အားမနာဘဲနဲ့ ကျွန်မ မိဘတွေဆီကို ဖုန်းဆက်တိုင်ပါ။ ကျွန်မအလုပ်မှာ လာပြီးတော့လည်း ကျွန်မကို အရှက်ခွဲပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ အပြောသာလွယ်ပေမယ့် အရမ်းကိုခက်ခဲလှတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအလျော်အစားတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ အများလေးစားခံရတဲ့ နေရာတစ်ခုအထိ ရောက်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားလာခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မအတွက် နာမည်ပျက်ခံလို့လည်း မရပါဘူး။ စွဲလန်းမိသူကို သတိရတိုင်းမှာ ညီမလေးရဲ့ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတစ်ခုနဲ့တင် စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့မိဘနှစ်ပါးမျက်နှာ၊ သနားစရာညီမလေးရဲ့မျက်နှာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင် ပြန်တိုက်ရပါတယ်။ သူများယောက်ျားကိုမှ လိုချင်တပ်မက်မိတဲ့ ရွံစရာအကောင်းဆုံးစိတ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အရမ်းအေးချမ်းတဲ့ လွတ်မြောက်မှုကို ရရှိသွားပါတယ်။ အဓိကနဲ့ သာမညကို ကျွန်မခွဲခြားတတ်လာပါတယ်။ စနိုက်ကျော်ဘဝကနေ ကျွန်မ ရုန်းထွက်နိုင်လိုက်ခြင်းဟာ ကျွန်မရဲ့ သိက္ခာ၊ မိသားစုသိက္ခာကိုသာမက ကျွန်မရဲ့ အနာဂတ်ကိုပါ ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာတော့ မြယမုံဟာ ရှင်နှောင်းဆီကို ဖုန်းဆက်လာပြီး မေးခွန်းတစ်ခု မေးခဲ့ပါတယ်။
“ရှင်နှောင်းနဲ့ ကျွန်မယောက်ျား ဘယ်အခြေအနေထိ ရောက်ခဲ့ကြလဲ”တဲ့။ မြယမုံ မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ရှင်နှောင်းက အမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ရှင်နှောင်းဘယ်လို ဖြေလိုက်သည်မသိ။ မြယမုံ တစ်ချက်တော့ ပြုံးသွားသည်။ ထိုအပြုံးသည် ကျေနပ်သောအပြုံးလား၊ နာကျင်သော မဲ့ပြုံးလားဆိုတာကိုတော့ မိန်းကလေးများသာ ခံစားနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သံသယဆူးချောင်းရဲ့ နာကျင်မှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်မ မြယမုံ သမီးလေးကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်လိုက်ပါတော့တယ်။ နူးနူးညံ့ညံ့ လက်သေးသေးလေးဟာ ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်ရောက်လာပါတယ်။ သြော်…. ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ ကျနေတာပါလား။ သမီးလေးကတော့ သူ့လက်သေးသေးလေးနဲ့ မျက်ရည်တွေ လိုက်သုတ်ပေးနေရှာပါတယ်။ သမီးလေးက ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေရင်း ပြောလိုက်တာက ” မေမေငိုရင် သမီးလည်းငိုချင်တယ်တဲ့ “။ ကျွန်မ နောက်ထပ် မငိုတော့ပါဘူး။ ဘယ်အချိန် ခြံထပ်ခုန်မယ်မှန်းမသိတဲ့ လင်ယောက်ျားကိုလည်း ကျွန်မ မတွယ်တာတော့ပါဘူး။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အားအင်တွေနဲ့ သမီးလေးဘဝအတွက် ကျွန်မ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါတော့မယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အဖေ လူပြိုနဲ့ ရှင်နှောင်းတို့ကိုလည်း ကျွန်မစိတ်ထဲက အပြီးတိုင် ထုတ်လိုက်ပါပြီ။
အချို့မိန်းကလေးများ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး အသိတရားရသွားရင်ဖြင့် ကျွန်မရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။ အမည်များတိုက်ဆိုင်သွားလျှင် ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်၊ မိမိတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတဈယောကျအဖေ လူပွိုနှငျ့ ရှငျနှောငျး (လိပျပွာလုံသူမြား၊ သူတဈပါးမိသားစုအား မဖကျြဆီးသူမြား၊ အမှားသိ၍ အမှနျပွငျနိုငျသူမြားသာ ဤပို့ဈကို ရှယျနိုငျပါသညျ)
(၁) ကြှနျမ နာမညျက ရှငျနှောငျးပါ။ သူနဲ့ စတှတေဲ့ အဖွဈအပကျြက ရိုးရှငျးလှပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ မရိုးရှငျးတဲ့အရာတှေ ဖွဈပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ အခုတလော ကြှနျမ အနီးအနားမှာ သူ့ကို မကွာခဏတှလေ့ာရတယျ။ သူ့ရဲ့ အကွညျ့နကျနကျတှကေို ကြှနျမ ရှောငျဖို့ခကျလှသလို ရှကျစိတျလေးနဲ့ ရငျဖိုမိတယျလို့ ပွောရမလားပဲ။ လူပြိုကွီး မိနျးမမယူသေးဘူးလားလို့ ဝိုငျးစနကွေတဲ့ သူ့သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး သူက” ဟကေ့ောငျတှေ မနောကျကွပါနဲ့ကှာ “ဆိုပွီး မကျြနှာကွီး ရဲခနဲဖွဈပွီး ပွနျပွောတယျ။ ကြှနျမ စဉျးစားမိတယျ။ သူ့လောကျ ခြောမောခနျ့ညားတဲ့သူက ဘာလို့ခုထိ အိမျထောငျမပွုသေးတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့။ လိုရငျးပွောရရငျတော့ ကြှနျမနဲ့ သူနဲ့ခဈြသူတှေ ဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုခတျေက မလှယျဘူးလေ။ လူလိမျတှကေ အမြားသားမို့လား။ ဒါကွောငျ့ ခဈြသူရှိလား အိမျထောငျရှိလား ကြှနျမသခြောအောငျ မေးပါတယျ။ အဲ့လိုမေးလိုကျတဲ့အခါတိုငျး သူက ပွနျပွောတယျ။ ” စိုးရိမျတတျရနျကော ကလေးရယျ “တဲ့။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ သခြောအောငျစုံစမျးရမှာက ကြှနျမတာဝနျလေ။ တဈသကျလုံး သိက်ခာရှိရှိ ရပျတညျလာခဲ့ပွီးမှ မယားငယျလညျး အဖွဈမခံနိုငျသလို စနိုကျကြျောလို့လညျး အပွောမခံနိုငျပေါငျ။ သူ့အကွောငျးတှေ စုံစမျးရငျးနဲ့ သူ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေအစ ကြှနျမနဲ့ တျောတျောရငျးနှီးနပွေီ။ တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ သိလာရတာက သူအိမျထောငျမပွုဖွဈတဲ့ အကွောငျးရငျးက အမခေဈြသားမိုလို့ပါတဲ့။ သူ့ရညျးစားဟောငျးကို ဖွတျခဲ့တာကလညျး သူ့အမေ သဘောမတူလို့ပါတဲ့။ သူနဲ့အတူ ခဈြသူဘဝကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနပေမေဲ့ …….. ဝမျးနညျးနာကညျြးဖှယျရာ အဖွဈအပကျြက စောငျ့ကွိုလို့နပေါတော့တယျ။
(၂) ကြှနျမအတှကျ အရမျးကိုတုနျလှုပျခြောကျခွားစခေဲ့တဲ့ နတေ့ဈနပေ့ါ။ ကြှနျမဆီကို ဖုနျးနံပါတျအစိမျးတဈခု ဝငျလာခဲ့တယျ။ ” ကြှနျမ မွယမုံပါ။ ကိုသီဟထကျနိုငျရဲ့ အမြိုးသမီးပါ။ ကိုယျ့ညီမတဈယောကျလို သဘောထားပွီး သတိပေးလိုကျမယျ၊ ပိုငျရှငျရှိ ယောကျြားတဈယောကျကို မွှူဆှယျနတေဲ့ကိစ်စ ရပျတနျးက ရပျပေးပါ” တဲ့။ မွယမုံဆိုတဲ့ အမြိုးသမီး ကြှနျမကို စိတျဆိုးမာနျဆိုးနဲ့ စကားတှေ အဆကျမပွတျ ပွောသှားပမေဲ့ သူ့အသံတှေ တုနျနတော ကြှနျမသတိထားမိတယျ။ ကြှနျမမှာ ပွနျပွောစရာ စကားတောငျ မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အိပျမကျကွီးထဲ ရောကျနသေလိုလို။ ရှကျရှံ့စိတျ နာကညျြးစိတျတှနေဲ့အတူ ရငျဘတျကွီးတဈခုလုံး ဟာတာတာခံစားခကျြတှနေဲ့။ ဂုဏျသိက်ခာကို အရမျးတနျဖိုးထားတတျတဲ့ ကြှနျမ……ဘဝတဈလြှောကျလုံး ဖွူစငျစှာ နလောခဲ့တဲ့ ကြှနျမ…. အခုတော့….. အခုတော့လေ…….. သူမြားလငျကိုမှ………….။
မောငျ့ကို ကြှနျမ စှနျ့လှတျရတော့မှာလား ဆိုတဲ့ အသိက ကြှနျမရငျကို မီးစနဲ့ ထိုးသလို ပိုပွီး နာကငျြစပေါတယျ။ ဟငျ့အငျး…. မောငျ့ကို မစှနျ့လှတျနိုငျဘူး၊ ရအောငျယူမယျ။ ရအောငျကို ယူပွမယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ …………. စနိုကျကြျောခွလှေမျးနဲ့ ရှတေ့ဈလှမျးတိုးလိုကျပါတော့တယျ။ မိသားစုဘဝတှကေို လိုကျဖကျြဆီးနတေဲ့ စနိုကျကြျောခွလှေမျးဆိုတာ …… ဘယျလိုမြိုးလဲ………။
(၃) မောငျ့ကို ကမ်ဘာပျေါမှာ နားလညျမှုအရှိဆုံး မိနျးမလိုမြိုး ကြှနျမ နခေဲ့တယျ။ ခဈြသူစိတျခမျြးသာဖို့ဆို ဘာမဆို ပေးဆပျဖို့ အဆငျသငျ့ဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးကို မောငျယုံအောငျ ဟနျဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။ မောငျ့အမြိုးသမီးဆီက ဖုနျးလာလို့ မောငျက မကိုငျခငျြရငျတောငျ ” ကိုငျလိုကျပါမောငျရယျ. …. မောငျ့သမီးလေးကိစ်စဖွဈခငျြ ဖွဈနမှောပေါ့” ဆိုပွီး စာနာနားလညျမှုရှိသလိုမြိုး ပွောပေးလိုကျတယျ။ စိတျထဲကတော့ ဘယျပါပါ့မလဲနျော။ မောငျ့မကျြလုံးထဲမှာ ကြှနျမကို စိတျထားအရမျးဖွူစငျတဲ့ ကောငျမလေးအဖွဈ မွငျလာအောငျ မာယာမြိုးစုံနဲ့ လှညျ့ဖွားပါတော့တယျ။ ဒါဟာ စနိုကျကြျောပွီဆိုတာနဲ့ မိနျးမတှေ အလိုလိုတတျလာတဲ့ ပညာပါ။ ပွီးတော့လေ မောငျ့မိနျးမ ကကျြသရရှေိလှတဲ့အကွောငျး ခြောကွောငျး လှကွောငျးပါ ကြှနျမက ခြီးကြူးလိုကျသေးတာ။ မောငျက ကြှနျမခေါငျးလေးကို ခပျဖှဖှ ပုတျပွီး ပွောလိုကျသေးတယျ။ ” မနာလိုတယျဆိုတာ ဘာမှနျးမသိတဲ့ မောငျ့ရဲ့ အဖွူထညျ ငတုံးမလေး”တဲ့။ ကြှနျမအပျေါ သနားစဖှယျ သတ်တဝါလေးလို မောငျက စိုကျကွညျ့နပေါတော့တယျ။ ကွှဆေငျးလာတဲ့ မောငျ့အကွညျ့တှကေို ရီဝဝေပွေနျကွညျ့ရငျး အခှငျ့အရေးကို အမိအရ အသုံးခပြါတယျ။ မောငျ့လညျပငျးကို သိုငျးဖကျလိုကျရငျး……. မောငျ့မကျြနှာကို ရှနျးရှနျးစားစား စိုကျကွညျ့ရငျး ” မောငျရယျ…….. မောငျနဲ့ ခြှတျစှပျတူတဲ့ သားလေးတဈယောကျလောကျ မှေးခငျြလိုကျတာ “ဆိုပွီး စကားလုံးတှနေဲ့ ကြှနျမ ခြုပျလိုကျပါတော့တယျ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ မောငျဟာ ကြှနျမစကားလုံးတှအေောကျ အရညျပြျောလာပါတော့တယျ။ ဘဝအဆကျဆကျက သံယောဇဉျတှကွေောငျ့ ဒီဘဝမှာ ရုနျးထှကျလို့မရတော့လောကျအောငျ ခဈြမိသှားတယျဆိုတဲ့စကားကို တဖွညျးဖွညျးနဲ့ မောငျ့ကို နားသှငျးခဲ့တယျ၊ ကိုယျတိုငျ ရုနျးမထှကျခငျြတာကို ဝနျမခံဘဲ ဝဋျကွှေးရှိလို့ ရုနျးထှကျမရတာဆိုပွီး မောငျသနားအောငျ မကျြရညျခြူခဲ့တယျ။ ” မောငျ့အိမျထောငျရေးကို မဖကျြဆီးခငျြပါဘူး။ ကြှနျမကို လာမတှပေ့ါနဲ့တော့ ကြှနျမကို ထားခဲ့လိုကျပါတော့နျော” ဆိုပွီး မောငျ့ရငျခှငျထဲ ခေါငျးထညျ့ပွီး မငျးသမီးရှုံးအောငျ ဟနျဆောငျပနျဆောငျနဲ့အားရပါးရ ငိုပွခဲ့တယျ။ “ ကြှနျမအနအေထားနဲ့ဆို ကွိုကျတဲ့လူပြိုကို ခေါငျးခေါကျယူလို့ရတယျ မောငျ့ကို ခဈြလှနျးလို့သာ အပြိုလေးတနျမဲ့သညျးခံနရေတာ”ဆိုပွီးတော့လညျး မရှိမဲ့ရှိမဲ့ စနိုကျသိက်ခာကို မွှငျ့တငျရပွနျတယျ။ မောငျ ကြှနျမကို အထငျသေးလို့မဖွဈဘူး။ မောငျ့မကျြလုံးထဲမှာ ကြှနျမဟာ အဖွူစငျဆုံး မိနျးကလေး… ဟုတျတယျ ကြှနျမသာလြှငျ အဖွူစငျဆုံး။
(၄) ကြှနျတျော သီဟထကျနိုငျပါ။ ကြှနျတျောမယားငယျထားတာ မဟုတျဘူးခငျဗြ။ ရညျးစားထားတာပါ။ မိနျးမရှိရကျနဲ့ ရညျးစားထားတယျပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတေျာ့အလုပျတာဝနျက နယျတှပွေောငျးပွီး တာဝနျထမျးဆောငျရတယျ။ မိနျးမကလညျး သူ့အလုပျနဲ့သူဆိုတော့ ကြှနျတျောနဲ့လိုကျမနနေိုငျဘူး။ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှတေောငျ ကြှနျတေျာ့ကို လူပြိုပဲထငျကွတာ။ ဆိုတော့ကာ ဂှငျဖနျလို့ ကောငျးတာပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတျောတှဲတဲ့ ကောငျမလေးတိုငျးကို ကိုကိုလို့ချေါခိုငျးတယျ။ ဇာတျလမျးတှထေဲကလို ဦးတှေ ကိုကွီးတှတေော့ မချေါခိုငျးဘူး။ ဖီးလျမလာလို့။ အခုကောငျမလေးကတော့ ဘာစိတျကူးပေါကျတယျမသိ။ မောငျလို့ချေါတယျ။ အစကတော့ ရှငျနှောငျးဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကို အပြျောထားတာပဲ။ ငယျငယျရှယျရှယျ ခဈြစရာကောငျမလေးတဈယောကျက ကြှနျတေျာ့ကို ကလေးအဖကွေီးမှနျး သိသှားတာတောငျ စိတျမနာတဲ့အပွငျ ခှငျ့လှတျတယျတဲ့ဗြာ။ ကလေးတဈယောကျအဖေ အိမျထောငျနဲ့ဆိုတာ ကြှနျတျော မပွောပွခဲ့တာကိုတောငျ သူက အပွဈမမွငျဘူးဗြ၊ မခှဲနိုငျလို့ ညာခဲ့တာ သူသိပါတယျတဲ့။ စိတျထား နူးညံ့လှနျးတဲ့ မိနျးကလေးပါဗြာ။ ရှငျနှောငျးနဲ့တှမှေ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လူရာဝငျသလို ခံစားလာရတယျ။ သူက ကြှနျတေျာ့ကို အရမျးလေးစားတယျ။ အရမျးလညျး အားကိုးတယျ။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ ကြှနျတျောမရှိလို့ဖွဈရငျ ဖွဈမယျ။ ရှငျနှောငျးလေးက ကြှနျတျောမရှိလို့မဖွဈဘူး။ သူက သိပျပွီး စိတျအားငယျတတျတာဗြ။ သိပျလညျး ရိုးသားတယျ။
…. မောငျ့လို ကလေးအဖကေိုတောငျ ဘာမှရယူလိုခွငျးမရှိဘဲ ခဈြတယျတဲ့လား ရှငျနှောငျးလေးရယျ။ ကိုယျ့အပျေါ နားလညျမှုအရှိဆုံးမိနျးမတဈယောကျကို စှနျ့လှတျရလောကျအောငျအထိတော့ မောငျမအသေးပါဘူး ကလေးရယျ…….မောငျတို့ အတူနနေိုငျဖို့ မောငျအရာအားလုံးကို ရငျဆိုငျမယျနျော။ ရှငျနှောငျးလေးသာရှိရငျ မောငျဘာမဆို ရငျဆိုငျဖို့ အသငျ့ပဲ။
(မှတျခကျြ၊ ယခုအခြိနျသညျ သားသမီးမလေ့ောကျအောငျ မှနျသောအခြိနျဖွဈသညျ)
(၅) စိတျတှဆေငျးရဲလှနျးလို့ သတျသခေငျြစိတျတောငျ ပေါကျတယျ။ သမီးလေးမကျြနှာကွောငျ့သာ ကြှနျမ မွယမုံ အားတငျးပွီး နနေရေတာပါ။ ခွံခုနျတဲ့နှား အကွိမျကွိမျ ခွံခုနျတယျဆိုတာ ကြှနျမ လကျခံရတော့မယျ။ အရငျတဈခေါကျက သူဖောကျပွနျတဲ့ကိစ်စကို လူကွီးမိဘတှေ ညှိနှိုငျးပေးလို့ သူနဲ့ မကှာရှငျးဖွဈခဲ့ဘူး။ အရငျ စနိုကျကြျောမတုနျးကလညျး ကိုယျ့လူကို နိုငျအောငျ ထိနျး ဆိုတဲ့စကားကိုပဲ ထပျတလဲလဲပွောတယျ။ စနိုကျတှကေို ရှငျးထုတျတာကလညျး ကိုယျ့လူကို နိုငျအောငျထိနျးတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုပဲလေ။ စနိုကျမက အပြိုဆိုတော့ တရားစှဲလညျး ကိုယျ့ယောကျြားပဲ ထောငျကမြှာလေ။ အဲဒါကွောငျ့လညျး စနိုကျတှေ မောကျမာနနေိုငျတာပေါ့။ သကျသအေထောကျအထား မခိုငျလုံရငျ ကိုယျ့တောငျ ပွနျအမှုပတျမဲ့ကိနျးမြိုးပဲ။ ဒါကွောငျ့ သကျသအေထောကျအထား ခိုငျလုံအောငျ စုဆောငျးရတယျ။ လကျပူးလကျကွပျမိအောငျ ကြှနျမ ကွိုးစားတယျ။ လကျပူးလကျကွပျကို မိခဲ့ပါတယျလေ။ သမီးလေးရဲ့ ရှရေ့ေးအတှကျ ရှိစုမဲ့စုနဲ့ ဝယျထားတဲ့ တိုကျခနျးလေးမှာပေါ့။ သူတို့နှဈယောကျ ဖွဈပကျြနပေုံကို မွငျလိုကျရတဲ့ ကြှနျမနရောသာ ဝငျပွီး စဉျးစားကွညျ့ပါတော့။ ခဈြလှနျးလို့လကျထပျခဲ့တဲ့ ယောကျြားနဲ့ တခွားမိနျးမတဈယောကျ ခဈြပှဲဝငျနကွေတဲ့ပုံကို မကျြလုံးထဲကကို မထှကျဘူး။ ရငျတှနောလိုကျတာ မပွောပါနဲ့တော့။ နှလုံးသားကို အကျဆဈနဲ့ ပကျလိုကျသလိုပါပဲ။ အတိတျကာလက ဒဏျရာတှတေောငျ အနာမကကျြသေးတဲ့အခြိနျ ရှငျနှောငျးဆိုတဲ့ မိနျးကလေး တဈယောကျ ပျေါလာပွနျပါတယျ။ ဒီကိစ်စက တဈဖကျမိနျးကလေးကိုပဲ ကြှနျမ အပွဈမတငျပါဘူး။ ကြှနျမယောကျြားကိုယျတိုငျက မကောငျးတာ ကြှနျမ ဝနျခံပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမ ယောက်ခမက အမှနျတရားဘကျက မပါပါဘူး။ သူ့သားဖောကျပွနျတာတောငျ ညညျးေ-ာကျသုံးမကလြို့ ဖောကျပွနျတာပေါ့တဲ့။ ညညျးက ပြျောအောငျမထားလို့ ငါ့သားလေးက အပြျောရှာတာတဲ့။ ပွောရကျလိုကျတာ။ သူလညျး သားအပွငျ သမီးတှပေါ မှေးထားတာပဲ။ ကိုယျခငျြးစာစိတျ မရှိလိုကျတာ။ လငျယောကျြားဖောကျပွနျလို့ စိတျဆငျးရဲရတဲ့အပွငျ ယောက်ခမကလညျး ကိုယျ့ကွောငျ့ ဖွဈရတယျလို့တဈဗဈြတောကျတောကျနဲ့ ပွောနလေတေော့ ကြှနျမ ဘယျလိုမှ သညျးမခံနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒေါသတှထှေကျလာပွီး အသံကလညျး တျောတျောကယျြသှားပါတယျ။
“ဒီမယျ အမေ…. အမသေ့ားကို ကြှနျမ ထောငျခပြဈလိုကျလို့ရတယျဆိုတာ သိရဲ့လား”
“ငါ့မွေးရဲ့ အဖကေို ညညျးက ထောငျခမြယျပေါ့ ဟုတျလား။ မဖွဈနိုငျတာ မပွောစမျးပါနဲ့အေ” လို့ ယောက်ခမက ခနိုးခနဲ့ လသေံနဲ့ ပွနျပွောပါတယျ။
သညျးမခံနိုငျတဲ့အဆုံးမှာတော့ ယောက်ခမကို တရစပျ ပွနျပွောမိပါတော့တယျ။
“ကြှနျမပွောတာ သခြောနားထောငျပေးပါ။ ဒီအခြိနျက မိနျးမသားခငျြး ကိုယျခငျြးစာပေးရမဲ့ အခြိနျပါ။ အမမှေ့ာလညျး လငျရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျခငျြးစာပေးပါ။ ညညျးကို ကိုယျခငျြးစာပေးရအောငျ ငါ့လငျက အဲ့လိုအတနျးစားထဲ မပါဘူးလို့ အမပွေောလညျး လောလောဆယျတော့ အမသေ့ားက အဲ့လိုအတနျးအစား ဖွဈနပေါပွီ။ အမသေ့ားကို ကြှနျမတရားမစှဲတာကိုတောငျ အမတေို့က ကြှနျမကို ကြေးဇူးတငျနရေမှာပါ။ ဒါကို ကြေးဇူးမတငျတဲ့အပွငျ ဟိုအကောငျကို တရားစှဲခငျြစိတျ ပျေါလာအောငျ အမတေို့ကိုယျတိုငျ ဆှပေးနသေလို ဖွဈနတောကိုရော အမတေို့သိရဲ့လား။ သိကွရဲ့လား။ တဈလငျတဈမယားကငျြ့သုံးခွငျးဆိုငျရာဥပဒဆေိုတာ ကြှနျမကိုယျတိုငျ တရားစှဲမှရမယျလို့ အမတေို့ထငျနတောလား။ မညျသူမဆို တရားစှဲလို့ရပါတယျ။ ကြှနျမအဈကိုက အရငျတဈခေါကျကိစ်စကတညျးက အမသေ့ားကို သတျခငျြနတောပါ။ သူ့ညီမလေး ခံစားနရေတာ မကွညျ့ရကျလို့ အမသေ့ားကို ကြှနျမအဈကိုက တဈလငျတဈမယားနဲ့ တရားစှဲဖို့လုပျနပေါတယျ။ ဒီတော့ အမပေ့ါးစပျကို ပိတျထားပေးပါ။ ဒီနေ့ ဒီအခြိနျ ဒီစက်ကနျ့ပိုငျးကစလို့ အမပေ့ါးစပျက ကြှနျမအသုံးမကလြို့ ဖွဈရတာပါဆိုတဲ့စကား တဈလုံးတောငျ မဟပါနဲ့။ ဒီလောကျ ရှငျးပွနတောတောငျမှ အမပေါးစပျ ဟရဲသေးတယျဆိုရငျ ဟကွညျ့လိုကျပါ။”
ကြှနျမစကားအဆုံးမှာတော့ ယောက်ခမမှာ တုပျတုပျမြှပငျ မလှုပျတော့ခြေ။
(၆)” သမီးကွီးရေ……. ရှငျနှောငျး….. ရှငျနှောငျး”.။ ကြှနျမ ဇောခြှေူးတှပြေံပွီး အိပျမကျက လနျ့နိုးသှားပါတယျ။ အိပျမကျထဲမှာ ကြှနျမရဲ့ မိခငျက ကြှနျမနာမညျကို အားကိုးတကွီး ချေါနပေါတယျ။ အိပျမကျထဲမှာဆိုပမေဲ့ အပွငျမှာ ချေါနသေလိုပါပဲ။ စိတျထဲမှာလညျးလေးနသေလို ဖွဈနပေါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ မမေကေ တုနျယငျနတေဲ့လသေံနဲ့ ဖုနျးဆကျလာလို့ အကွောငျးစုံ သိသှားပါတယျ၊ မီရာကားနဲ့ မိဘအိမျကို အပွေးပွနျခဲ့ပါတော့တယျ။ အိမျထဲအရောကျမှာတော့…… ခုတငျပျေါမှာ ပကျလကျလေးလှဲလြောငျးနတေဲ့ ကြှနျမညီမလေးကို သနားစဖှယျ တှလေို့ကျရပါတော့တယျ။ ကြှနျမခေါငျးတှေ ခြာခြာလညျ မူးသှားပါတော့တယျ။ ခုတငျဘေးမှာ ခေါငျးငိုကျစိုကျနဲ့ ထိုငျနတေဲ့ ဖဖေလေ့ကျမှာလညျး ပတျတီးတှနေဲ့ပါလား။ ညီမလေးက နစေ့လေ့စေ့ ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ပါ။ ညီမလေးယောကျြား ကြှနျမရဲ့မတျ ဖောကျပွနျနတောကွာပွီတဲ့လေ။ ညီမလေးက နတေို့ငျး တငိုငိုတရီရီ ဖွဈနပွေီး မနကေ့တော့ သှေးကွောကို ဘရိတျဓားနဲ့ လှီးပွီး သတျသဖေို့လုပျတယျတဲ့။ အဲဒါကို ဖဖေမွေငျတော့ သားသမီးဇောနဲ့ ပွေးလုလိုကျတာ ဘရိတျဓားက ဖဖေလေ့ကျဖဝါးကို ထိုးခှဲမိသလိုပါ ဖွဈသှားတယျတဲ့။ ဖဖေရေယျ….. သားသမီးအတှကျ အပူဟာ ဖဖေလေ့ကျက ဒဏျရာထကျ ပိုပွီးနာကငျြရမယျဆိုတာ သမီးနားလညျပါတယျ။ ညီမလေးက သူ့ယောကျြားနဲ့ ဖောကျပွနျတဲ့ မိနျးကလေးအကွောငျး ကြှနျမကို ပွောပွတဲ့အခြိနျမှာတော့….……. ။
(၇) ကိုယျတိုငျထိမှ ကြှနျမနာတတျခဲ့ပွီလေ။ ညီမလေးရဲ့ ယောကျြားကို လုယူသှားတဲ့ မိနျးမလုပျတဲ့အကှကျတှဟော ကြှနျမ ဦးသီဟထကျနိုငျကို ဖွားယောငျးခဲ့တဲ့ မာယာတှနေဲ့ တဈထပျတညျးပါပဲလား။ ဒါကွောငျ့လညျး အဲ့လူက ဗိုကျကွီးသညျညီမလေးကို ပဈပွီး စနိုကျမနောကျ ပါသှားခဲ့တာကိုး။ ရှံစရာအကောငျးဆုံး မာယာတှနေဲ့ ဖွူစငျခငျြယောငျဆောငျပွီး သူတဈပါးမိသားစုကို ဖကျြဆီးဖို့ ကြှနျမ ကွိုးစားခဲ့တယျ။ ကြှနျမ အမှားကွီး မှားသှားပွီ။ လူတဈယောကျ ကြူးလှနျလိုကျတဲ့ အမှားဟာ သူနဲ့ သကျဆိုငျသူအားလုံးကို ထိခိုကျနာကငျြစတောပါလား။ အတှေးလေးတဈခကျြ မှားတာနဲ့ ကြှနျမရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ၊ မိသားစုဂုဏျသိက်ခာ၊ ကြှနျမရဲ့ အနာဂတျ ရစေုနျမြောဖို့ သီသီလေးပဲ လိုတော့တာပါလား၊ ကြှနျမစိတျကူးမပွောငျးခငျမှာပဲ ခဲရာခဲဆဈ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုကို အမွနျခပြွီး မမွယမုံဆီကို ဖုနျးချေါလိုကျပါတော့တယျ။ သူ့ဆီကို ကြှနျမဖုနျးချေါပွီး ကြှနျမ မိဘနာမညျ၊ မိဘဖုနျးနံပါတျ၊ နရေပျလိပျစာတို့ကို လိုကျမှတျခိုငျးလိုကျပါတယျ။ ကြှနျမ အလုပျလိပျစာနဲ့ ဖုနျးနံပါတျကိုလညျး ပေးလိုကျပါတယျ။ တကယျလို့ ကြှနျမရှတေို့းခဲ့မယျဆိုရငျ မမွယမုံအနနေဲ့ ကြှနျမကို အားမနာဘဲနဲ့ ကြှနျမ မိဘတှဆေီကို ဖုနျးဆကျတိုငျပါ။ ကြှနျမအလုပျမှာ လာပွီးတော့လညျး ကြှနျမကို အရှကျခှဲပါလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။ ဒါဟာ အပွောသာလှယျပမေယျ့ အရမျးကိုခကျခဲလှတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအလြျောအစားတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီမှာ အမြားလေးစားခံရတဲ့ နရောတဈခုအထိ ရောကျအောငျ ခကျခကျခဲခဲ ကွိုးစားလာခဲ့ရတဲ့ ကြှနျမအတှကျ နာမညျပကျြခံလို့လညျး မရပါဘူး။ စှဲလနျးမိသူကို သတိရတိုငျးမှာ ညီမလေးရဲ့ အိမျတှငျးရေးပွဿနာတဈခုနဲ့တငျ စိတျဆငျးရဲနရေတဲ့မိဘနှဈပါးမကျြနှာ၊ သနားစရာညီမလေးရဲ့မကျြနှာ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ မကျြနှာကို မွငျယောငျရငျးနဲ့ ကိုယျ့စိတျကို နိုငျအောငျ ပွနျတိုကျရပါတယျ။ သူမြားယောကျြားကိုမှ လိုခငျြတပျမကျမိတဲ့ ရှံစရာအကောငျးဆုံးစိတျကို စှနျ့လှတျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ အရမျးအေးခမျြးတဲ့ လှတျမွောကျမှုကို ရရှိသှားပါတယျ။ အဓိကနဲ့ သာမညကို ကြှနျမခှဲခွားတတျလာပါတယျ။ စနိုကျကြျောဘဝကနေ ကြှနျမ ရုနျးထှကျနိုငျလိုကျခွငျးဟာ ကြှနျမရဲ့ သိက်ခာ၊ မိသားစုသိက်ခာကိုသာမက ကြှနျမရဲ့ အနာဂတျကိုပါ ကယျတငျလိုကျနိုငျပါတယျ။
နှဈပတျခနျ့အကွာမှာတော့ မွယမုံဟာ ရှငျနှောငျးဆီကို ဖုနျးဆကျလာပွီး မေးခှနျးတဈခု မေးခဲ့ပါတယျ။
“ရှငျနှောငျးနဲ့ ကြှနျမယောကျြား ဘယျအခွအေနထေိ ရောကျခဲ့ကွလဲ”တဲ့။ မွယမုံ မေးတဲ့ မေးခှနျးကို ရှငျနှောငျးက အမှနျအတိုငျး ပွနျဖွလေိုကျပါတယျ။ ရှငျနှောငျးဘယျလို ဖွလေိုကျသညျမသိ။ မွယမုံ တဈခကျြတော့ ပွုံးသှားသညျ။ ထိုအပွုံးသညျ ကနြေပျသောအပွုံးလား၊ နာကငျြသော မဲ့ပွုံးလားဆိုတာကိုတော့ မိနျးကလေးမြားသာ ခံစားနားလညျနိုငျပါလိမျ့မညျ။
သံသယဆူးခြောငျးရဲ့ နာကငျြမှုတှနေဲ့အတူ ကြှနျမ မွယမုံ သမီးလေးကို ရငျခှငျထဲဆှဲသှငျးပွီး ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျလိုကျပါတော့တယျ။ နူးနူးညံ့ညံ့ လကျသေးသေးလေးဟာ ကြှနျမ မကျြနှာပျေါရောကျလာပါတယျ။ သွျော…. ကြှနျမ မကျြရညျတှေ ကနြတောပါလား။ သမီးလေးကတော့ သူ့လကျသေးသေးလေးနဲ့ မကျြရညျတှေ လိုကျသုတျပေးနရှောပါတယျ။ သမီးလေးက ငိုမဲ့မဲ့ဖွဈနရေငျး ပွောလိုကျတာက ” မမေငေိုရငျ သမီးလညျးငိုခငျြတယျတဲ့ “။ ကြှနျမ နောကျထပျ မငိုတော့ပါဘူး။ ဘယျအခြိနျ ခွံထပျခုနျမယျမှနျးမသိတဲ့ လငျယောကျြားကိုလညျး ကြှနျမ မတှယျတာတော့ပါဘူး။ မိခငျတဈယောကျရဲ့ အားအငျတှနေဲ့ သမီးလေးဘဝအတှကျ ကြှနျမ အစှမျးကုနျကွိုးစားသှားပါတော့မယျ။ ကလေးတဈယောကျအဖေ လူပွိုနဲ့ ရှငျနှောငျးတို့ကိုလညျး ကြှနျမစိတျထဲက အပွီးတိုငျ ထုတျလိုကျပါပွီ။
အခြို့မိနျးကလေးမြား ဒီစာလေးကို ဖတျပွီး အသိတရားရသှားရငျဖွငျ့ ကြှနျမရေးရကြိုးနပျပါပွီ။ အမညျမြားတိုကျဆိုငျသှားလြှငျ ခှငျ့လှတျကွပါကုနျ၊ မိမိတို့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံမြားကိုလညျး ထပျမံဖွညျ့စှကျနိုငျပါတယျ။